Kubvunzana naIsabel Abenia: «Unofanirwa kunge uchikumbira iwe pachako» | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Isabel Abenia. Facebook nhoroondo.
Elizabeth Abenia anobva Zaragoza, akapedza kudzidza muMutemo uye zvakare ane zvidzidzo muArt uye Medieval Nhoroondo. Pamusoro pe munyori, ndizvo mupendi. Atumira chete nano nhatu, ese enhoroondo enhoroondo, asi anokwana kuti awane nzvimbo munzvimbo dzekutanga. Zita rake rechitatu ndere Sibyl yekupedzisira uye vasati vava ChiDutch Alchemist y Erik the Godo.
Nhasi ndipei izvi indavhiyu maanotiudza zvishoma zvezvose nezvevanyori vaanofarira uye mabhuku, kuverenga kwake uye mapurojekiti, maitiro ake ekunyora kana maonero aari kuita iyezvino ekuburitsa chiitiko. Ndinokutendai zvikuru nguva yavo, mutsa uye kuzvipira, pamwe nekutora chikamu kwavo munhevedzano yehurukuro dzakapihwa kune vanyori venhoroondo vanyori vari kutibatsira kudzidza zvakawanda nezvavo. Uye ikozvino zvandinozviongorora ndinoona kuti ndiye chete munyori.
KUKURUKURA NAISABEL ABENIA
ISABEL ABENIA: Amai vangu vakandidzidzisa leer kare de tanga ku Enda kuchikoro, iyo panguva yangu yaive nemakore mana. Yakanga iri pamusoro nyaya dziri nyore iyo mhando yaive isina anopfuura gumi kana gumi nemaviri mapeji ane makuru madhirowa.
Nguva pfupi ndatanga ne evana ekushambadzira mabhuku, akateedzana e Enid Blyton uye zvakafanana, asi pamakore masere kana mapfumbamwe ndave ndarangarira ndichiverenga bhuku, ngatitii, zvakatonyanya ... chii Ini handizive ndikuudze kuti chii chaive icho primera. Zviripachena haana kunzwisisa zvikamu zvekupokana, asi haana kusiya hapana bhuku nekuti raive anofarira kuverenga. Sezvo ini ndaivewo nyanzvi yekudhirowa, zvine musoro mhedzisiro yaive yekuti akandikurudzira nyora mifananidzo ine mifananidzo pazera risina kujairika.
IA: Semwana, bhuku rega rega rinokanganisa, kudzidza kunogara kuripo uye pfungwa dzinovhurika kune ruzivo rwakasiyana rwakanyorwa zvachose. Zvisinei, ndinogona kutaura izvozvo Zita rerosi yaive yakakosha kwazvo novel kwandiri, pamwe nekuti yakaita kuti ndifunge kekutanga mukana we tendeuka en munyori.
IA: Ini ndinokwezva kune vekare vechiGiriki nevevanyori veRoma, kunyanya Plutarch, wandaka shandura kuva mumwe wevatambi vari munganonyorwa yangu Sibyl yekupedzisira; of ChiSpanish Goridhe Age kune akawanda anoita kunge anoshamisa kwandiri, asi ndinoyemura zvikuru Lope de Vega, wandinotenda kuti zvechokwadi ndiye Fénix de los Ingenios.
Nezve zvinyorwa zvemazana maviri apfuura, ini ndinoda rondedzero ye Robert Makuva, asi ndinofanirawo kutaura Umberto Echo yekuremerwa iro basa rambotaurwa rakanga riine pandiri. Nguva pfupi yadarika ini ndanyatsonakidzwa nekuchena kwe vadetembi of the Nguva yaCarolingian, pakati payo yandaizosimbisa Theodulf weOrleans. Ichokwadi ndechekuti ini ndinofarira zvishoma zvezvose uye handikwanise kutaura kuti ndine munyori wandinoda.
IA: William weBaskerville Ini ndinofunga ndiye mumwe wevanonyanya kufadza mavara munhoroondo yezvinyorwa.
IA: Iyo Nyarara. Ndinozviona zvakaoma kunyora kana kuverenga nezwi rekumashure.
IA: Hofisi yangu mangwanani-ngwanani. Pamberi, ini ndaifarira kunyora husiku, pamwe nekuti ndaive ndakakomberedzwa nekudzikama kwandinoda kuti ndiite saizvozvo, asi kufamba kwenguva kunondimanikidza kuti ndishandure dzimwe tsika nekuti zvinoda simba rakawanda kuti ndanonoka kurara.
IA: Dzakati wandei, asi kana ndichifanira kutumidza imwe zvingave Robert Makuva. Iko kusanganiswa kweyakaomarara nhoroondo ine yakanakisa yekubata uye nhetembo lexicon iyo yaanoratidzwa ndeyakajeka mubatanidzwa kwandiri.
IA: Iyo zvekare yemhando ipi neipi uye kudzidzira vakararama panguva imwe chete. Asi muchokwadi, iyo genre haina basa zvakanyanya sehunhu hwekunyora.
IA: Ivhu panguva imwe chete mabhuku akati wandei panguva imwe chete, mukati mezuva randakaverenga Ensayo uye usiku novel. Panguva ino ndine mabasa akati wandei e kuburitswa pamusoro peBhabhironi uye neanoverengeka emanoveli kubva kushamwari uye vamwe vangu.
IA: Ndinofunga zvakawandisa zvakagadziridzwa mazita, uye kuzvishambadza inotowedzera kunyanya panorama nekuti pane zvakawandisa zve mabasa izvo zvisina kuitika hapana sefa. Sezvo mune zvese, iyo kunyanyisa kupa vulgarises chigadzirwa uye kuderera su mhando. Makore mashoma apfuura paive neakawanda magwaro ezvinyorwa uye izvozvi zvanyanya zvishongo zvakachipa, kunyange yakaremara mune dzimwe nguva.
Tiri kushandura iyo basa rakanaka mukungonakidzwa cheteIzvo zvakafanana nemhedzisiro yeimba DIY maringe nemidziyo inogadzirwa neakanaka cabinetmaker. Uye neizvi handireve kuti hazvifanirwe kuyedzwa, asi unofanirwa kunge uchikumbira pachako uye uchiremekedza vamwe. Kune mabhuku ane anachronisms, zvakashata chiperengo uye zvikanganiso girama, iyo inoratidza kushomeka kwekufunga kwevaverengi.
Dambudziko rakawedzerwa nderekuti vamwe mabasa akanaka kubva kuvanyori vakakurumbira kurasikirwa nekuonekwa, mwedzi wega wega kune mazana ekutanga uye kushambadzirwa kwebhuku, umo munyori ave achikwanisa kuisa makore ehupenyu hwake, inoderedzwa kusvika kumwedzi miviri chete. Mushure menguva ino, haichisiri chinhu chitsva uye inobviswa kubva kuchitoro chemabhuku windows.
IA: Kubva pakuona kwangu hazvipo hapana chakanaka Mune njodzi yatiri kurarama kana mune iyo yatakasiya kuti tirarame. Denda iri rave kurova kukuru kubhodhi, hope dzinotyisa dzisati dzapera uye dzinozova nemhedzisiro yakaipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naIsabel Abenia: "Unofanirwa kunge uchikumbira iwe pachako"